မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: June 2010 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဥရောပမှ ပြစ်ပယ်လိုက်တဲ့ စာရင်း
သြစတြေးလျားရောက် ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် သမီး အိမ်ပြန်ရမည်
(မည်သည့် နိုင်ငံတွင်မဆို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် ပညာတော်သင်တက်နေသော နအဖ မှ သားသမီးများ ၏ အချက်အလက်များသိရှိပါက သတင်းပေးပို့ ကြပါခင်များ ၊ အဆိပ်ပင်ရေမလောင်း နိုင်တော့သော သြစတြေးလျားမှ သင်ခန်းစာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်)
စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း Wednesday, June 30, 2010 . သြစတြေးလျ နိုင်ငံ၌ စာရင်းကိုင် ပညာသင်ကြား နေသည့် မဇင်မွန်အေး သည် စီးပွားရေးအရ အရေးယူ ဒဏ်ခတ် ထားသော စာရင်းဝင် တဦး ဖြစ်နေသည့် အတွက် မကြာမီ ရက်ပိုင်း အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သြစတြေးလျ ပြည်ထောင်စု တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ဟု သိရှိရသည်။
They said Ms Aye was inviting the courts to second-guess Mr Smith's sanctions policy. This they could not do.Rest of your post
ဒေါင်းအလံခိုး ပြီးနောက် ခမောက်ထပ်ခိုး၍ NLD နဲ့ NDF ခမောက်ကိစ္စ အငြင်းပွား
NLD နဲ့ NDF ခမောက်ကိစ္စ အငြင်းပွား By ဦးကျော်အောင်လွင် ဗုဒ္ဓဟူး, 30 ဇွန် 2010
မြန်မာစာကို ကျနော် မကျွမ်းပါ။ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာစာပညာရှင်တွေစာရေးဆရာကြီိးတွေ၊ အယ်ဒီတာကြီးတွေ၊ပညာရှင်တွေရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြတော့မြန်မာ စာမကျွမ်းတဲ့လူကဝေဖန်ရတာအတော်တော့ဂွကျပါတယ်ဗျာ ။ ၀ိုင်းပြီုး ဖြစ်သင့်တာလေးတွေ ဝေဖန်ကြစေချင်ပါတယ် ။
ပထမ ဆုံးကတော့၁၉၉၃ မှာ ညီလာခံ အတုကြီးးစလိုက်တယ် ။ သူတို့စိတ်ကြိုက် ဆွဲ ခိုင်းတဲ့ အဓိက အကျဆုံးအခြေခံ မူကြီး၁၀၄ ချက်ကိုအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတယ် ။ အဲဒီ အခြေခံ မူကြိး၁၀၄ ချက်ထဲမှာနေပြည်တော် ဆိုလို့ တခွန်းတပါဒ မှမပါဘူး ။ ဒါကတော့ အသေအခြာကိုမပါတာ ။ ဘယ်မှာ ရှိမှန်းတောင်မသိသေးသလို သန်းရွှေခေါင်းထဲမှာလဲ တစက်ကလေးမှ မရှိသေးဘူး ။ ရှိခြင်းရှိ ကြိုင်ကြိုင် ခေါင်းထဲမှာရှိရင်တော့ မသိဘူး။ ညီလာခံမှာတော့ လုံးဝ မရှိသေးဘူး ။
၂၀၀၀ - ၂၀၀၁ လောက်မှာအယုတ်တမာ မြောက်ကိုးရိးယားနဲ့အဆက်ဖြစ်လာတော့ ဟိုကစစ်ဌာနချုပ် ပြောင်းဘို့ အကြံပြုလာတယ် ။ အခု ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေ ပါမှာပေါ့ ။ အတိအကျတော့ မသိဘူး ။ ဒီအကောင်တွေ ကို တိုင်ပင်တာတော့ သိနေရတယ် ။ သူကလဲ နဂိုကတော့ စစ်ဌာနချုပ် လောက်ကိုသာ ရွှေ့ ဘို့ ပါ ။ ၂၀၀၃ - ဒိပဲယင်း မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသေသတ်ဘို့ အပီ ဆိုပြိး လုပ်တာဘုန်းကံခြင်းက မမှီတော့ အသေမသတ်နိုင်လိုက်ဘူး ။
သူမြင်ထားတာကလဲဒေါ်စုကိုရှင်းလိုက်ရင်ကျန်တဲ့နောက်လိုက်တွေ ဘာမှ သိပ် မလုပ်တတ်ဘူး ။ မလုပ်ရဲဘူးပေါ့ ။ ပွဲ ပြတ်ပြီ ဒီလို အပိုင်တွက်ပြီ်းလုပ်တာဘဲ ။
အဲဒီ ဒီပဲယင်း အပြီးမှာသောက်ရှက်ပြေအနေနဲ့ ကမ္ဘာ ကိုလှည့်စားဘို့ ( Road Map ၇ ချက် ) ကိုချရှိုးတယ် ။ ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကပြင်ပ ကမ္ဘာ ကို မျက်နှာမပြရဲတော့လို့ ခင်ညွှန့် ကို ၀န်ကြီးးချုပ်ဆိုပြီးနေရာပေးလိုက်ရတယ် ။ ယော်ကျား ရင့်မကြီးစစ်သားကြီးတွေကကအမျိုးသမိး ၂၀၀ လောက်ပါတဲ့ ယဉ်တန်းကိုလူ ၄၀၀၀ လောက်နဲ့ ဝိုင်း ပြီးအမှောင်ထု အကာအကွယ်ယူ ရိုက်သတ်( ရဲ ) ကြတာ ကမ္ဘာမှာ ဗမာ စစ်သားကွ လို့ကြွေးကြော် ရလောက်အောင်စောက်ရှက်ကွဲသွားတာ ။ အဲဒီမှာတင် ကမန်းကတန်း ထပြီးလူတွေနဲ့ဝေးရာကြက်ပြေးကိုတောတိုးပြေးတော့ပါဘဲ။
ဘယ် ဗေဒင်ကမှ အကြံပေးလို့ မဟုတ်ဘူး ။ လူကြားမျက်နှာမပြရဲ တော့ လို့။ သူ့ သိက္ခာ သူ မလုံလို့။ အဲဒီကထဲ က သူဘဲ တသက်လုံး တက်လာခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သိးအစည်းအဝေး ဆိုတာ ဖိတ်မှာ အသေ ကြောက်နေတာ ။ အခုနေ အာဆီယံတို့၊ အမေရိကန် တို့ ကသန်းရွှေကိုဖိတ်ရင်သွေးတတ်ပြီးသေသွားလိမ့်မယ်။
ခုတော့သန်းရွှေ က နေပြည်တော် နေပြည်တော် နဲ့တတော်ထဲ တော်နေလိုက်တာ ။ ပြည်တွင်းက ဆရာတွေ ပညာရှင်တွေကိုတော့ မဝေဖန်လိုပါဘူး ။ နီးရာဓါး က ရမ်းလွန်းအားကြိးတော့ ကိုယ်လဲ ကြောက်ရမှာဘဲ ။ ပြည်ပကမီဒယာတွေ၊ ဆရာကြီးးတွေ၊အနေနဲ့တော့ဒီအတိုင်းကြည့်နေကြတာ မသင့်လှပါဘူးဗျာ ။
ရှေးထုံးကိုလဲမပယ်နဲ့ဆိုစကား ရှိတယ် ။ မြန်မာစာပေ အရေးအသား ကို သန်းရွှေ ဘာမှ မသိသူက လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတာ ကိုထောက်ပြကြပါအုံး ။ အခုဟာ သန်းရွှေ သုံးထားတာ အမှန်ယူရင်ကျနော်တို့ဘိုးဘေးတွေ မှားနေတယ် ဖြစ်နေလို့ ပါ ။ ရှေးမြန်မာစာ ကိုတီထွင်လာခဲ့သူ ကျေးဇူးရှင်ကြီးးတွေ ကို မှားတယ် သတ်မှတ်ရာရောက် နေ လို့ ပါ ။
ရှေးတုံးက စာပေတွေမှာမန်းရတနာပုံနေပြည်တော် လို့ သုံးနှုန်း ပါတယ် ။ အခု သန်းရွှေ သုံးနှုန်း သလိုသာရေးရရင်မန်းရတနာပုံ နေပြည်တော် ဟာနေပြည်တော် မန်းရတနာပုံ ဖြစ်မနေဘူးလား ။
ကဲ ဥပမာဗျာစကားအဖြစ်ပြောရရင်ခွေးနေပြည်တော် နဲ့နေပြည်တော် ခွေးဥပမာပေးရရင်ခွေးနေပြည်တော် ဆိုရင်ခွေးတွေ စိတ်ကြိုက်နေသော နေရာ လို အဓိပါယ် ရပါမယ် ။ နေပြည်တော်ခွေး ဆိုရင်နေပြည်တော် က ခွေး လို့ အဓိပါယ် က အတော်လေးကို ကွာသွားပါပြီ ။ လုံးဝ ကိုကွာသွားပါပြီ ။
ထပ်ဥပမာပေးပါရစေပုဂံ နေပြည်တော် ဆိုရင်ပုဂံ မြို့့တော် ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် ။ နေပြည်တော်ပုဂံ ဆိုလိုက်ရင်နေပြည်တော်က ပုဂံ ဖြစ်သွားတော့အဲဒီမှာ အဓိပါယ်က တက်တက်စင်အောင်ကို ကွဲလွဲ သွားပါပြီ ။ ဒီနေရာမှာနေပြည်တော် ကဘယ်နေပြည်တော်မှန်းတောင် အတတ်ပြောလို့ မရတဲ့ ပုဒ် ဖြစ်နေပါတယ် ။
ထပ်ဥပမာပေးပါရစေအုံးဗျာ ။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေက ရေးတော့ အမှန် ဖတ်တော့ အသံ လို့ ဆိုထားသေးတယ် ။ ကျနော်တို့ အညာမှာဆိုရှေးက ပိုဆိုးတယ် ။ အင်းဝ ကို( အ၀ ) လို့ဘဲ သုံးနှုန်းကြတယ် ။ အဲဒီတော့အင်းဝနေပြည်တော် လို့ ရေးရင်အညာသားက
( အ၀နေပြည်တော် ) ဘဲအသံထွက်တာ ။ ထားတော့ ။ အဲဒါကို သန်းရွှေ သုံးသလို သုံးလိုက်ရင်နေပြည်တော်အင်းဝဟာ.( နေပြည်တော်အ၀ ) လို့ အသံထွက်ရင်နေပြည်တော်အပေါက်ဝ လို့ အဓိပါယ်ရောာက်သွားပါတယ် ။
နောက်တခုကနေပြည်တော် ဆိုတာ မြန်မာ စာမှာ အဓိပါယ်က မပြောသော်လည်းနားလည်ပြီးးသားနေပြည်တော် ဆိုတာနဲ့ ( မင်းနေသောပြည်တော် ) တနည်း( မင်းနေပြည်တော် ) လို့ လူတိုင်းနားလည်ထားကြတယ် ။ နေပြည်တော် ခေါ်ဆိုသုံးနှုန်းရင်အဲဒီဝေါဟာရ နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့ဲမြို့ မှာ မင်း( ဘုရင် ) ရှိကိုရှိမှ သုံးနှုန်း လို့ ရတယ်ဆိုတာလည်း လူတိုင်းက အလိုလိုနားလည်နေတာ ။
အလိုလိုနားလည်နေသလိုဘဲ ဘုရင်မရှိဘဲ ဒီလိုသုံးတာ လွှဲ နေပြီ မှားနေပြီ လို့ လဲ ခံစားမိလျှက်သားဖြစ်နေတယ် ။
သန်းရွှေ ဟာ အခုတော့ သူခိုးဘုရင်ကြီးး တင်မက( ခိုးတတ်လွန်းလို့ သူခိုး ပါ ) ကနေ ဘုရင်ဘွဲ့ ကိုပါ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ယူနေတာပါလားလို့ လဲ နားလည်လိုက်ပါတယ် ။ ကျုပ်ပြောတာ နဲနဲ လွန်တယ်ပြောခြင်သေးလား ။ လူချင်းတော့မသိပါမြန်မာစာ ဆရာကြီးးဆရာမောင်သာရ ကိုရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။
ခိုးတာမှ လွန်လွန်ကဲကဲ ခိုးလို့ သူခိုးကြီးဘဝကနေ ဘုရင် အဖြစ်ကို တရားဝင် ဘိသိတ် မခံဘဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဘုရင်လို့ဗြောင် မကြေညာဘဲ ခိုး ပြိးဘုရင်အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးနေတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ ပြောရမလဲ အရပ်တို့ ကူညီကြပါအုံးကျုပ်ကလဲ မြန်မာစာ ညံ့ ညံ့ပါဆိုနေမှ ။
သန်းရွှေ ကိုနဲနဲ သတိလေး ကပ်ဘို့ ပြောချင်တာကအိမ်စောင့်အစိုးရ လက်ထက်မှာရှမ်းစော်ဘွား တွေကိုစော်ဘွားစံနစ်ဟာပဒေသရာဇ် စံနစ်ဖြစ်တာမို့ ခေတ်ကာလနဲ့ မဆီလျှော်တော့လို့စော်ဘွားစနစ်ကို တပ်မတော် အစိုးရကဘဲ ရပ်ပ်ြစခဲ့ပြီးပါပြီ ။ သန်းရွှေ ကိုတိုင်လဲသတင်းတွေမှာညောင်ရွှေ စော်ဘွားကြီးအဆက်အနွယ်တွေကိုအာဏာရူးနေတဲ့ပုံစံရေးစေတယ် ။ သူကိုယ်တိုင်ကဘုရင်ရူးရူးနေတာ ကိုယ်ကသူများကိုတော့ပြောတယ် ။ ဟိုစော်ဘွားအနွယ်တွေ စော်ဘွားပြန်ဖြစ်ချင်တာ သူတို့ က စောဘွားအဆက်တွေမို့ ပြောလို့ကောင်းသေးတယ် ။ ကိုယ်ကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တောသား ။်
ဘုရင်လုပ်ချင်ရင်အရင်ဆုံး ကြိုင်ကြိုင် ကို ကွာရှင်းအုံး ။ တလင်ကွာမကြီးနဲ့ ဘိတ်သိပ်ခံလို့ ကတော့( မပြောတော့ပါဘူး ) ။ တခါ ဘုရင်ဆိုတော့ ထိးမွေနန်းမွေ ပေးရအောင်ကလဲသား - ၃ယောက်မှာကြိုင်စန်းရွှေ က မယားပါသား ။ သားအစစ်ကလဲ ကလေးနှစ်ယောက်အမေ တလင်ကွာမ ကိုယူထားတာ ။ အငယ်ကတော့ ကြောင်နေတဲ့ အရူး ။ သမီးနှစ်ယောက်ကလဲစိတ်မမှန်ရှာဘူး ။ အတွင်းလူယုံတွေ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ် ။ ညသကောင်တလွဲ ထပြိး ဇီိးသီိး စာချင်တယ်ဆိုရင်လူကြီိးတွေ၊ ၀န်ကြီိး၊၀န်လေးတွေမီးဆလိုက်တွေထိုးပြီးဇီးပင်တက် ကြရရှာတယ် ။ အခုရေချိုးချင်တယ်ဆို အခု လူပုံလယ် အ၀တ်တွေချွတ်ချတဲ့အထိစိတ် လွတ်တတ်တယ် ဆိုဘဲ ။
ဘုရင်လုပ်ရင်လဲပုဂံ ရဲ့ နောက်ဆုံးမင်းဆက်နာရသီဟပတေ့ လိုဘဲနာမည်ဆိုးတွင်ကျန်ခဲ့ဘို့ သေခြာနေပြီ ။ ဟိုက ( တရုတ်ပြေးမင်း ) တရုပ်ရန်ကြောက်လို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရလို့။ သန်းရွှေကတော့ ( တရုပ်ကျွေးမင်း ) တတိုင်းတပြည်လုံး ကို တရုပ် လက်ထဲ ထိုးကျွေးလိုိ့ပါ။
ထပ်ပြီိးပန်ကြားလိုပါတယ်မြန်မာစာ ဆရာကြီးးများဝေဖန်ရင် ကျနော်ထက်ပို ထိမိပါမယ် ။ ဝေဖန်စ၇ာတွေလည်း အများကြီးးရှိနိင်ပါတယ် ။
အားလုံးကိုလေးစားလျက်Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:13 PM0comments
The Burmese government has previously ordered farmers to kill rats or face punishment (Reuters)By NAW NOREEN Published: 30 June 2010
Author: NAW NOREEN Category: Environment, News Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:42 PM0comments
Wednesday, 30 June 2010 20:54 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
[ မြန်မာ မှတ်ပုံတင်/နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်]
မှတ်ပုံတင်လုပ်ခအတွက် ငွေကြေးကောက်ခံသူများမှာ ဦးအောင်မျိုးလွင်(လ၀ကခရိုင်ဦးစီးမှူး)၊ စိုင်းဆိုင်တွီ (လ၀ကမြို့နယ်မှူး)နှင့် ဦးကျော်ကျော်လှိုင် (လ၀ကစာရေး) တို့ဖြစ်ကြသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:38 PM0comments
[ချွေးပြန်နေသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကန္ဒီမြို့ရှိ စွယ်တော်ပူဇော်ထားရာ ကျောင်းတော်သို့ ရောက်စဉ်က တွေ့ရပုံ (ဓာတ်ပုံ - Reuters)]
“အထောက်အထားများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နျူကလီးယားတပ်ဖွဲ့က ရေးဆွဲထားသည့် ပုံစံမူကြမ်းများမှာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ ခြင်းကို ပြနေသည်။ အချက်အလက်များ စိစစ်မှုအရ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ နျူကလီးယား အစီအစဉ်မှာ ခေတ်နောက်ကျလွန်း လှပေသည်”ဟု ရောဘတ် ကယ်လီက ဆိုထားရာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ခေတ်ကတည်းက အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းကို အောက်ခြေ အရာရှိများက လိမ်ညာ ဖုံးဖိထားသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ အာဏာရှင် အကြိုက်ဖြစ်မည့် သတင်းလွဲများသာ တင်ပြခဲ့ကြသဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် မည်သည့်စီမံကိန်းမျှ အကောင်အထည် မပေါ်ခဲ့ခြင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စေ့စေ့တွေးရင်း အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြစ်နေမည်မှာ မလွဲဟု ဝေဖန်သုံးသပ်သူများက ဆိုကြသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:34 PM0comments
အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေးငယ်အား အနိုင်ကျင့် စော်ကားသူကို ရုံးတင်တရားစွဲ
မြတ်ခိုင်ဦး / ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၀
အသက် (၁၁) နှစ်သာရှိသေးသော မိန်းကလေးငယ်အား အကြိမ်ကြိမ်စော်ကား မတရားကျင့်မှုဖြင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတဦးအား တရားရုံးတင်ရန် ယမန်နေ့က အမှုဖွင့် အရေးယူလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
မိဘများမရှိခိုက် မိန်းကလေးငယ်လေးအား သေနတ်ပြခြိမ်းခြောက်၍ မတရားပြုကျင့်ခဲ့သူ ရာဘာခြံအလုပ်သမား စိုးမောင်မောင်အား Rask Thai ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ကလေးသူငယ်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (ဘန်ဖတ်ဒတ်) တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူရပ်ဌာနီခရိုင်၊ ထချန်းမြို့နယ်၊ ဆပ်ဝီယ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထချန်းမြို့နယ်ရှိ နန်းတလေ ရော်ဘာခြံအတွင်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သော ကိုမိုးလှိုင်နှင့် မသိန်းကြည်တို့၏ အသက် (၁၁) နှစ်အရွယ် သမီးငယ် မမိုးဝါအား မိဘများ ရော်ဘာသွားခြစ်သော ညများတွင် အဆိုပါခြံမှ မန်နေဂျာအမျိုးသမီး၏ ယောက်ျားဖြစ်သူ စိုးမောင်မောင်က မကြာခဏလာရောက် ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိခင်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
မမိုးဝါ၏မိခင်ဖြစ်သူ မသိန်းကြည်က “ကျမတို့က ညဘက်ဆို (၁၁) နာရီလောက်စပြီး ရော်ဘာခြစ်ရတယ်လေ။ အဲဒါ သမီးနဲ့သားငယ် (၂) ယောက်ကို အိမ်မှာ သေသေချာချာမှာထားခဲ့တယ်။ ဘယ်သူလာလာ တံခါးမဖွင့်ပေးရဘူးလို့။ သူက မန်နေဂျာမရဲ့ ယောက်ျားဆိုတော့ သမီးကကြောက်တော့ ဖွင့်ပေးတာနေမယ်။ သမီးပြောတာက သူ (၄) ခါ၊ (၅) ခါ အဲဒီလို လာတယ်လို့ပြောတယ်။ လက်ထဲမှာ သေနတ်နဲ့ ဘယ်သူမှ မပြောရဘူး၊ ပြောရင် သတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ခြောက်ထားတော့ ကလေးက မပြောရဲဘူး။ အခုက စကားများရန်ဖြစ်မှ သမီးက ငိုပြီးပြောလို့ သိရတာ” ဟု ဝမ်းနည်းစွာ ပြောပြသည်။
စိုးမောင်မောင်သည် အသက် (၂၅) နှစ်ခန့်ရှိပြီး ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ ရာဘာခြံမန်နေဂျာမှာ အသက် (၄၅) နှစ်ခန့်ရှိကာ ထိုအမျိုးသမီးတွင် ယခင်အိမ်ထောင်နှင့် သားသမီး (၃) ဦးရှိသည်။
မတရားပြုကျင့်မှု ပေါ်ပေါက်ရသည်မှာ အဆိုပါမန်နေဂျာ အမျိုးသမီး၏သားဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ မမိုးဝါ၏ မိဘများနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ကြရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မန်နေဂျာအမျိုးသမီး၏ အသက် (၂၀) ခန့်ရှိသူ သားဖြစ်သူက မိဘတို့ထမင်းစားချိန် အချိန်မမီ၍ မစားရသော အခါများတွင် တခါတရံ၌ မမိုးဝါထံ လာရောက်၍ ထမင်းတောင်းစားလေ့ရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့်လ မနက်လင်းပိုင်းတွင် မမိုးဝါ၏ မိဘများ ရော်ဘာခြစ်ရာမှပြန်အလာ အိမ်တွင် စားပြီးသား ထမင်းပန်းကန်တွေ့၍ သမီးဖြစ်သူအားမေးမြန်းကာ မန်နေဂျာမိသားစုထံ မိဘများမရှိခိုက် ယင်းသို့ အိမ်ကိုလာရောက် တောင်းစားသည်ကို မကြိုက်ကြောင်း သားဖြစ်သူကို ဆုံးမပေးရန်ပြောကြားရာမှ အခြေအတင် စကားများကြပြီး ယခုကဲ့သို့ စိုးမောင်မောင်က မမိုးဝါအား မတရားကျင့်သည့် ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမပိုင်းတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လမ်းလွှဲရန် စိုးမောင်မောင် မိသားစုက ကြိုးပမ်းသော်လည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ တရားဝင် ဆေးရုံမှတ်တမ်း၊ ဆေးစစ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအရ အခိုင်အမာ သက်သေပြနိုင်ပြီဖြစ်သည့်အတွက် တရားစွဲဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ ထိုသို့သော ကလေးသူငယ်များကို စော်ကားမှုများအား မိဘများက တရားရင်မဆိုင်လျှင်ပင် အခြားသော အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များက တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
မမိုးဝါသည် မိဘများ ရော်ဘာသွားခြစ်ခိုက် မောင်ငယ် (၂) ဦးကို စောင့်ရှောက်ရင်း အိမ်တွင် ကျန်ရှိနေသည်ကို စိုးမောင်မောင်က လူသူကင်းရှင်းသော ည (၁၁) နာရီခွဲခန့်တွင် လာရောက်လေ့ရှိကာ မမိုးဝါအား စော်ကားနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပွားသည်မှာ တလခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သော ဆေးရုံမှတ်တမ်း၊ ဆေးစစ်ချက်များလည်း ဝီဖဝတီဆူရပ်ဌာနီ ဆေးရုံကြီးမှ အခိုင်အမာရရှိထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု Raks Thai ဖောင်ဒေးရှင်းမှ တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ရဲစခန်းကလည်း လိုအပ်တာအကုန်လုံး သေချာစစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်လည်း ပညာရတယ်။ နောက်ဆို ဘယ်လို စနစ်တကျ လုပ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့။ လာမယ့် (၆) ရက်နေ့မှာ ထချန်းတရားရုံးမှာ အမှုစတင်ရင်ဆိုင်ရမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါတွင် မသိန်းကြည်တို့ မိသားစုအား ထိုရော်ဘာခြံမှ ထွက်သွားခိုင်း၍ မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်သူတဦး၏ခြံတွင် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသည် ရော်ဘာခြံများ၊ သီးပင်၊ စားပင် စိုက်ပျိုးပင်များဖြင့် စီးပွားဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိရာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် ရော်ဘာခြစ်လုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများ ရှိသည်။ ညပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် အေးမြလာချိန်တွင် ရော်ဘာအစေးခြစ် ထွက်ကြရပြီး မနက်ခင်းပိုင်းတွင် အနားယူ အိပ်စက်ကြရသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် (၁၅) ရက်တခါခန့် ခြစ်ပြီးသား အခြောက်လှန်းထားသော ရော်ဘာချပ်များကို ရောင်းချလေ့ရှိကာ ထိုသို့ရောင်းချသော ရက်များကို စနည်းနာ၍ မသမာသူများ၏ ဓားပြတိုက်မှုများလည်း အမြဲလိုလို ဖြစ်ပေါ်နေတတ်၍ ရော်ဘာခြံပိုင်ရှင်များက မိမိတို့၏တပည့်တပန်းများကို သေနတ်များပေးကာ ကိုင်ဆောင်စေလေ့ရှိသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 9:30 PM 1 comments
တော်တော်ရိုင်းတဲ့ မြန်မာ အိမ်ရှင်..
By ဦးသားညွန့်ဦး တနင်္လာ, 28 ဇွန် 2010
3 Watt နဲ့5Watt ဆိူတာ..ခရမ်းချဉ်သီး မီးသီး သာသာပါ..ဒါကို..175 ဒေါ်လာပေးရမယ်..၂သိန်းလောက်ကျမယ်..ဘယ်သူ ၀ယ်သုံးနိူင်မလဲ..စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး..
လက်လုပ်လက်စားအောက်ခြေက ပြည်သူလူထုဘ၀..င်္ကြဖွတ်က နှိပ်စက်.. နအဖ က နှိပ်စက်နဲ့ .. ဖယောင်းတိ်ုင်လေးတောင် ထွန်းဖို့ အနိုင်နိုင်ဗျာ..
နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး High Efficiency Multicrystal Photovoltaic ဆိုလာပြား များကို ရာနှုန်းပြည့် ဂျပန် နည်းပညာဖြင့် အမှတ်(၂) စက်မှု ၀န်ကြီး ဌာန၏ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ (ဒဂုံ)၊ LED မီးသီး ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံက ထုတ်လုပ်ထား ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း များ၏ တရားဝင် ထောက်ခံ အသိ အမှတ် ပြုထားသော ဆိုလာပြားများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဆိုလာပြားများမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထွက်ရှိမှုကို အနှစ် ၂၀ အထိ အာမခံ ပေးထားပြီး ၀ယ်ယူလို ပါက ရန်ကုန်တွင် LED မီးသီးစက်ရုံ (၀၁-၆၅၁၄၂၈၊ ၀၁-၆၅၁၄၃၁) နှင့် နေပြည်တော် ၌ မြန်မာ့ စက်ကိရိယာ နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း ၀၆၇-၄၀၅၀၅၉၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၂၂၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၂၂ တို့သို့ ဆက်သွယ် နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
၂၉ . ၆ . ၂၀၁၀ http://www.htwd.info/2010/06/solar.html
Posted by အာဇာနည် at 10:48 PM0comments
ယခုနှစ်သည် လာနီညာ နှစ် ဖြစ်ပါက မုန်တိုင်း အန္တရာယ် ပိုမို သတိထားသင့်
ယခုနှစ် သည် လာနီညာ နှစ် ဖြစ်ပါက မိုးနှောင်း နှင့် မိုးလွန်ကာလများ တွင် မုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကို ပိုမို သတိ ထားသင့်ကြောင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က ဆိုပါသည်။ အကယ်၍ ဒီနှစ်သာ လာနီညာနှစ် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် မိုးနှောင်း နဲ့ မိုးလွန် ကာလ တွေမှာ မိုး ကောင်းနိုင်မယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ကာလ တွေမှာ မုန်တိုင်း ပိုဖြစ်နိုင်ပြီး မြန်မာပြည် အတွက်လည်း အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီနှစ်ဆောင်း တွင်း မှာ ပိုအေး နိုင်တယ်ဟု ၄င်းက ပြောပါသည်။ ယခုလ တိုင်းထွာ ချက်များ အရ လာနီညာနှစ် ဖြစ်နိုင် ခြေ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကြားနေနှစ် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အယ်နီညို ၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေပြီး၊ လာနီညာနှစ် ဖြစ် မဖြစ်ကိုမူ ဇူလိုင်လကုန်တွင် အတိအကျ သိရှိရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လာနီညာနှစ် ဖြစ်ပါက သက် တမ်းမှာ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အထိ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်သည်။ ခုတောင် လာနီ ညာနှစ် ဖြစ်နိုင်ခြေက ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုရင် နောက်လတွေမှာ ပိုများ လာနိုင်တယ်။
လောလောဆယ်မှာ မကြေ ညာနိုင် သေးပေမယ့် လာနီညာနှစ် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်ဟု ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က ဆိုပါသည်။ အကယ်၍ လာနီညာနှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါက သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလ များတွင် မိုးကောင်း နိုင်ပြီး ယင်း မိုးသည် သက်နုနှင့် သက်လတ် စပါးများ စိုက်ပျိုးလိုသူ တောင်သူ လယ်သမားများ အတွက် အဖျက်မိုး ဖြစ်နိုင်သဖြင့် သက် ကြီး စပါးမျိုးကိုသာ စိုက်ပျိုး သင့်ကြောင်း ၄င်းက ထည့်သွင်း ပြောဆိုပါသည်။
၂၉ . ၆ . ၂၀၁၀
ကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ရန်ကုန်ဆိုတာ မီးပြတ်တယ်မရှိခဲ့ပါဖူး။
ကျွန်တော်တို့အဖေတွေ ဖဆပလခေတ်က ရန်ကုန်ဆိုတာ မီးပြတ်တယ်မရှိခဲ့ပါဖူး။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တွေ မဆလခေတ်က ရန်ကုန်ဆိုတာ မီးပြတ်တယ်မရှိခဲ့ပါဖူး။
ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ ကြံဖွတ်ခေတ်မှာ မှ ရန်ကုန်ဆိုတာ မီးပြတ်တော့တာဘဲ။
၂၄ နာရီ..မီးပေးမယ်ပြော မဲဆွယ်တာ..ရီစရာဘဲ..ဒါတွေ ရိုးနေပြီ
အခွန်စား အစိုးရလုပ်နေရင်..လမ်းဖောက်တံတားဆောက်.. မီးရေအပြည့်အစုံပေးရမှာ အစိုးရရဲ့တာဝန်..
ငါလက်ထက် မှ မီးရတယ် ပြောပြီးဂုဏ်ယူတာ...အထင်ကြီးစရာမှ မဟုတ်တာဘဲကွယ်...
ညိမ်းသူ | တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၆ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တွင် လာမည့်လဆန်းမှ စတင်၍ လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီပေးမည်ဟု မြို့တော် လျှပ်စစ်ပေးရေးအဖွဲ့ အကြီးတန်းအရာရှိတဦး အဆိုအရ သိရသည်။
ယင်းသို့ ၂၄ နာရီမီးပေးရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ညွှန်ကြားထားကာ ယင်းအတွက် ဇူလိုင်လကို သတ်မှတ်ကြောင်း သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
’’ရွေးကောက်ပွဲကလည်း အားလုံး ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲ အောက်တိုဘာလို့ အကြမ်းအားဖြင့် သိထားပါတယ်။ ဒါက ပြောနေကြတာ အပြင်မှာလည်း ပြန့်နေပါပြီ။ အဲဒီအခါကျတော့ အစိုးရက ဖွဲ့ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မဲရရှိဖို့အတွက် ၂၄ နာရီ မီးပေးဖို့ ကိစ္စကို လုပ်တာလို့ ထင်မိတယ်’’ ဟု အကြီးတန်း အရာရှိက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်ရှိ ၄၅ မြို့နယ်တွင် မီးပေးချိန်ကို ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က စတင်ကာ ပြောင်းလဲထားရာ ယခင်ထက် ၆ နာရီ တိုးပေးထားသည့်အတွက် စုစုပေါင်း တနေ့လျှင် ၁၂ နာရီ ရရှိနေကြသည်။ အချို့မြို့နယ်များတွင် ၁၂ နာရီထက်ပိုကာ ရရှိကြသည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်မူ တနေ့လျှင် ၁၈ နာရီခန့် မီးရရှိကြောင်း ၎င်းမြို့နယ် လက်ဆောင်ကုန်း (မြောက်) ရပ်ကွက်သားတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွက် လိုအပ်သော မဂ္ဂါဝပ်မှာ ၆၈ဝ ခန့်ရှိသည့်အနက် ယခုပေးနေသော မဂ္ဂါဝပ်မှာ ၄၅ဝ ခန့် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ပေးဝေရေးအဖွဲ့၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
လက်ရှိပေးဝေမှုမှာ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတို့က ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်အားတို့ကို ၂ ခုပေါင်းကာ မဟာဓာတ်အား လိုင်းဖြင့် ပေးနေသည်ဟု ယင်းအကြီးတန်းအရာရှိက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် လျှပ်စစ်ထုတ်ဝေပေးနိုင်မှုမှာ ၆ဝဝ မဂ္ဂါဝပ်ကျော်သာ ရှိသေးသော်လည်း ရန်ကုန်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုမှာ မဂ္ဂါဝပ် ၄၅ဝ ခန့် ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။
လာမည့်လတွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် မဂ္ဂါဝပ် ၉ဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်ကို ၂၄ နာရီ မီးပေးရန် စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်ကို ၂၄ နာရီ မီးပေးသည့်အချိန်တွင် ရန်ကုန်ရှိ စက်မှုဇုန်များကို တနေ့လျှင် နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိ မီးပေးသွားမည်ဟု လည်း အမည်ဖော်လိုသူ အရာရှိကြီးက ပြောသည်။
ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ စက်မှုဇုန်များကို တနေ့လျှင် ၅ နာရီ မီးပေးလျက်ရှိကာ၊ ရန်ကုန်တွင် စက်မှုဇုန် ၁၉ ဇုန်ရှိပြီး ယင်းစက်မှု ဇုန်များ လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲမှုမှာ မဂ္ဂါဝပ် ၉ဝ နီးပါးရှိသည်။
’’စက်မှုဇုန်တွေအားလုံး လည်ပတ်မှု မရှိဘူးလေ။ ရန်ကုန်မှာက အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ စက်မှုဇုန်ကို ပြောပါဆိုရင်တော့ လှိုင်သာယာကိုပဲ ပြောရမှာ။ ကျန်တဲ့ ဇုန်တွေထဲမှာတော့ ရွှေပြည်သာ၊ သာဓုကန်၊ ဒဂုံအရှေ့ အဲဒါလောက်ပဲ နည်းနည်းပါးပါး လည်ကြတာ ရှိတယ်’’ ဟု စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ှုငါတို့ လို မိန်းမ၀တ် ပိုးချိတ်ထမီ မ၀တ်လာတာကြောင့် ပါးချတယ်ဟယ်..
မန္တလေး မြို့တော်ဝန် ပါးရိုက် အပြစ်ပေးရန်ပိုင် Tuesday, June 29, 2010
ဦးဖုန်းဇော်ဟန်သည် ကျောက်မဲမြို့ အခြေစိုက် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်(စကခ) (၁)တွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် ရာထူးဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရာထူးကို စွန့်လွှတ်ထားသူ ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့သို့ နယ်စပ်မှ တရုတ်လူမျိုး အမြောက်အမြား ၀င်ရောက်လာကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် ရှေး ယခင်က တည်း နေထိုင်ခဲ့သည့် တရုတ်လူမျိုးများကဲ့သို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်၍ ထိုသို့သော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ စာနယ်ဇင်းသမား တဦးက ပြောသည်။
မိမိကလေးငယ်များအတွက် သောက်စရာရေ မရှိ.. နအဖ စစ်စခန်းအတွက် ချိုးရေ ထမ်းပို့ ပေးနေရ
ရေရှားသည့်ပြဿနာကြားက နောက်ထပ်ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်နေရေးသားသူ - ကူးရယ် တနင်္လာနေ့, 28 ဇွန် 2010 05:00
မိုးရာသီရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ကရင်နီပြည်တွင်းဒေသတွင် မိုးရွာသွင်းမှုနည်းပါးပြီး တောင်သူများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသော ပျိုးပင်များကို ရေမပေးနိုင်သည့်အပြင် သောက်သုံးရန်အတွက်ပါ ရေလုံလောက်မှုမရှိသည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည်။
ထိုကြားထဲက နောက်ထပ်ပြဿနာတခု ထပ်ပေါ်လာသည်မှာ ကျေးရွာအနီးအနားတွင် အခြေစိုက်နေသော မြန်မာစစ်တပ်များက စခန်းအတွက် ရေမပို့မနေရ အမိန့်ထုတ်ထားသည့် အတွက်ကြောင့် ရွာသားများအနေဖြင့် ပိုမိုခက်ခဲမှုများကို ရင်ဆိုင်ရပြန်ပါသည်။
ကရင်နီပြည် ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှ ရွာသားများသည် ရွာအနီးအခြေစိုက်ထားသော စစ်တပ်စခန်းအား နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရေထမ်းပို့ပေးနေရသည်။ စစ်တပ်အတွက် သောက်သုံးရေအပြင် ချိုးရေကိုပါခတ်ပို့ပေးနေရသည်ဟု ရွာသားများကပြောသည်။
တပ်စခန်းတခုလျင် တရက်ကို ၀ါးမောက်ဗူး (တစ်ဂါလံရှိသောရေဗူး) ၄၅ဗူးအချိန်မှန် ပို့ပေးနေရပြီး မပို့ပေးပါက ဒဏ်ငွေသော်လည်းကောင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုသော်လည်းကောင်း ပေးဆောင်ရသည်ဟုဆိုသည်။
“မြန်မာ စစ်တပ်တွေ ရေဆင်းချိုးတယ်ဆိုတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ တပ်ထဲမှာဘဲ ချိုးတယ်လေ။ ကျနော်တို့အတွက်တော့ တခါတလေဆို စားဖိုးအတွက်တောင်မရှိဘူး” ဟု တပ်စခန်းများအတွက် အမြဲလိုလို ရေထမ်းပို့ပေးနေရသော ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှ ရွာသားတဦးကပြောသည်။
ဖရူဆိုမြို့နယ် ဖူးကရားခူကျေးရွာအနီးတွင် စစ်အစိုးရတပ်ရင်း ၅၁၃ မှ တပ်အင်အား ၂၀ ဦးဖြင့် အခြေစိုက်လျက်ရှိသည်။ ကရင်နီပြည်သံလွင်မြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ယခင်ကမိုးခေါင်ရေရှားပါးမှု မဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခု၂၀၁၀ခုနှစ်သည် ရေရှားပါးဆုံးနှစ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး လာမည့်အချိန်ကာလတွင်လည်း မိုးရွာသွင်းမှုမရှိပါက ပိုမိုဒုက္ခရောက်နိုင်သည်ဟု ရွာသားများက ယူဆထားကြသည်။
“ရေထွက်ပေါက်နဲ ကျနော်တို့ ရွာက တနာရီလောက် လမ်းလျှောက်ရပါတယ် ပြီတော့ ရေကိုရဖို့အတွက် အကြာကြီးထပ်စောင့်နေရတော့ အချိန်အရမ်းကုန်တယ် တောင်ယာ အလုပ်တွင်ကိုပါ ပျက်တယ်။ အခုချိန်ထိ မိုးမရွာသေးဘူး ရွာမှာဘယ်လိုလာမလဲမသိသေးဘူး။ အခုရာသီမှာဆိုရင် ထွန်းယက် စိုက်ပျိုးရမယ့်အချိုန်ပါ ဒါပေမဲ့ မိုးမရွာတော့ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး။” ဟုဖရူဆိုမြို့နယ် ဖူကရားခူကျေးရွာမှ လယ်သမားတဦးကပြောသည်။
ခန်းခြောက်နေသောရေထွက်ပေါက်မှရေပြန်ထွက်လာရန် သက်ကြီးရွယ်အိုတဦးမှ ရေနတ်တင်ပူဇော်နေစဉ်(ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
ခန်းခြောက်နေသော ရေထွက်ပေါက်မှ ရေပြန်ထွက်လာရန် သက်ကြီးရွယ်အိုတဦးမှ ရေနတ်တင် ပူဇော်နေစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:15 PM 1 comments
တွန့် ဆုတ်နေတဲ့ သုည နဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့သန်းလေးဆယ်။
တွန့် ဆုတ် တွန့် ဆုတ်နဲ့ 
ခင်များ တာထွက်ဖို့ ကျိုးစားနေတာလား
တွန့် ဆုတ်တွန့် ဆုတ်နဲ့ 
တွန့် ဆုတ်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာမှန်းကို မသိဖြစ်နေရော့လား။
ဒါလေးအတွက် ခင်များမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့်အများကောင်းစားရေးအတွက်
အဓိက ဘာလုပ်ရမှာ မှန်းသိလျက်နဲ့ 
တွန့် ဆုတ်နေတဲ့ လူ
သန်း ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ ချီသွားတဲ့ အခါ
ခင်များတင်မက ကျွန်တော့ မှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:01 PM0comments
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး ထက် လူသတ်လက်နက်ဝယ်ရေး နအဖ အနေနှင့်ပိုမို စိတ်အားထက်သန်နေ
[၁၅၅ မီလီမီတာ အမြောက်ကြီး (www.militarypictures)]
၁၅၅ မီလီမီတာ အမြောက်ကြီး (www.militarypictures)
မြန်မာနိူင်ငံတွင် ၀င်ငွေ အများစုသည် ရေနံနှင့်သဘာဝ ဓါတ်ငွေတူးဖေါ်ခြင်းမှ ရရှိနေပြီး အဆိုပါဝင်ငွေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ကို မြန်မာစစ်တပ် စစ်အသုံးစာရိတ်အတွက် အသုံးချနေကြောင်း နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့များက ခန့်မှန်း ကြသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:46 PM0comments
ဆင်တော့ မသိဘူး ကြွက်တွေတော့ ပြောင်းနေပြီ တိရိစ္ဆာန်တွေတော့ဘေးသိလို့ ပြေးပြီ
Share/Save/Bookmark နေပြည်တော် - ရန်ကုန် လမ်းမသစ် ကြီးပေါ်တွင် နေပြည်တော် ဘက်မှ အုပ်စုလိုက် ရွှေ့ပြောင်း နေကြသည့် ထောင်နှင့်ချီသော ကြွက်အုပ်များကို ယခု ရက်အတွင်း တွေ့ရကြောင်း ခရီးသွားများက ပြောသည်။
[နေပြည်တော်-ရန်ကုန် လမ်းမပေါ်တွင် ကားကြိတ်မိထားသော ကြွက်များ (ဓာတ်ပုံ - blog.nyilynnseck.com)]
တရုတ်နိုင်ငံတွင်၂၀၀၈ ခုနှစ် စီချွမ် ငလျင် မတိုင်ခင်ကလည်းကောင်း၊ ယခုနှစ် မေလကုန်ပိုင်းကလည်း ဂရိတွင်လည်းကောင်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဖားများ လမ်းပေါ်ထွက်လာပြီး အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့မှု ဖြစ်ပေါ်ဖူးသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:35 PM0comments
“ဖြူဖွေးနေတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ ဆန်မှုန့်ရောင်ပါ” ဆန်မှုန့် ရောင်ဆင်မ သန်းရွှေခွတော်မူပါတော့မယ် ခင်မျ
ခိုင်စု | အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၀၂ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဆင်ဖြူပေါ်လျှင် နိမိတ်ကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူသည့် စစ်အစိုးရအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း အဖြူရောင်အဆင်းရှိ ဆင်မတကောင်ကို ဒေသအာဏာပိုင်များက ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးရမိလိုက်သည်။
မောင်တောမြို့အနောက်ဘက် ၁၂ နှစ်မိုင်ခန့်ရှိ ဖက်ဝန်းချောင်းရွာအနီး တောင်တန်းပေါ်၌ အခြားတောဆင် ၄ ကောင်နှင့် သွားလာနေစဉ် ဆင်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များက မေ့ဆေးသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဘူးသီးတောင် အခြေစိုက် စကခ (စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်) ဗျူဟာမှူးနဲ့ နေပြည်တော် နယ်စပ်ဒေသ စစ်ဆေးရေးနဲ့ ကွပ်ကဲရေးဌာန (နစက) ညွှန်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အေး ဦးစီးပြီး ဆင်ဖြူလိုက်နေတာ။ ၄ ရက်လောက်အကြာမှာ ဖမ်းမိတာပါ။ ဆင်ရှာအဖွဲ့က မေ့ဆေးသေနတ်နဲ့ ပစ်ဖမ်းတယ်လေ” ဟု မောင်တောအခြေစိုက် (နစက) နှင့် နီးစပ်သူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ မောင်တောမြို့ခံတဦးက “ဖြူဖွေးနေတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ ဆန်မှုန့်ရောင်ပါ” ဟု ပြောသည်။
ယင်းဆင်ဖြူကို ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့နယ် ဖက်ဝန်းချောင်ရွာအနီး၌ ရွာသားများက တွေ့ရှိခဲ့ရာ အာဏာပိုင်များထံ သတင်းပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း နစကနှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရထုတ် ယမန်နေ့ ကြေးမုံသတင်းစာထဲတွင်လည်း ဒေသခံပြည်သူတို့၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ဆင်ဖမ်းအဖွဲ့များက ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် ဆင်ဖြူတော်တစီး ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းနှင့် အသက် ၃၈ နှစ်ခန့်ရှိ ဆင်မဖြစ်ပြီး အရပ် ၇ ပေ ၄ လက္မရှိကာ လုံးပတ်မှာ ၁ဝ ပေ ၁၁ လက္မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဘူးသီးတောင်အခြေစိုက် ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ ၃၇၆ နှင့် မောင်တောမြို့ ၄ မိုင်အခြေစိုက် လုံထိန်းတပ်ရင်း ၂ ရင်းမှ တပ်သားအင်အား ၇ဝဝ ခန့်အား နေပြည်တော်မှ နစက ညွှန်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အေးနှင့် စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် (စကခ) ၁၅ ဗျူဟာမှူးတို့က မောင်တော နစက ဌာနချုပ်မှနေ၍ ဦးစီးကွပ်ကဲပြီး စစ်ဆင်ရေးတရပ်အနေဖြင့် ဆင်ဖြူတော်ရှာဖွေရေး ပြုလုပ်နေစဉ် ယခုလို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆင်ဖြူမအား မောင်တောမြို့နယ် ဖါးဝပ်ချောင်းရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ထားရှိပြီး သစ်တောရဲက အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ကာ နစက၊ စစ်တပ်နှင့် လုံထိန်းတပ်သားများက လုံခြုံရေးယူထားသည်။ ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့၌ပင် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (နပခ) တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သောင်းအေးကိုယ်တိုင် လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သေးသည်။
၂ဝဝ၄ ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင် မယူတောင်တန်း၌ ဆင်ဖြူတကောင်နှင့် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မောင်တောမြို့နယ်၌ ဆင်ဖြူတကောင်စီ တွေ့ရှိခဲ့သေးကြောင်း နယ်စပ်သတင်းများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သေးသည်။
မယူတောင်တန်းမှ ဆင်ဖြူကိုမူ ထိုစဉ်က စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က ရန်ကုန် အင်းစိန်မြို့နယ် မင်းဓမ္မကုန်းတော်တွင် ရတနာဆင်ဖြူတော် အမည်ရှိ ဥယျာဉ်တခု တည်ဆောက်ပေးကာ ထားရှိခဲ့သည်။
ရှေးမြန်မာဘုရင်များ လက်ထက်ကတည်းက ဆင်ဖြူတွေ့ရှိပါက ဆင်ဖြူရှင်ဘွဲ့ခံယူခြင်း၊ မင်းကောင်းမင်းမြတ်အဖြစ် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားခြင်းများ ရှိခဲ့ကာ ဆင်ဖြူပေါ်လျှင် ၎င်းတို့အတွက် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းအဖြစ် စွဲလန်းမှုများ ရှိခဲ့သလို လက်ရှိ စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲများတွင်ပါ ထိုသို့သော စွဲလန်းမှုမျိုး ရှိနေကြောင်း လေ့လာသူများက ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။
သို့သော်လည်း ယခု ဆင်ဖြူဖမ်းဆီးရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများအကြား စိတ်ဝင်စားမှု မရှိကြောင်း မောင်တောမှ သံဃာတော် တပါးက မဇ္ဈိမကို မိန့်သည်။
ဦးဇင်းက “ဆင်ဖြူဆိုပေမယ့် ဖွေးဖွေးဆွတ်ဖြူနေတဲ့ ဆင်မျိုးတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ အရင်တုန်းကရတဲ့ ဆင်တွေလည်း ကြီးလာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မည်းလာတာပဲ။ အဲဒီအတွက် ပြည်သူတွေကလည်း သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အတွင်းက ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်း (၈၂ နှစ်) ကလည်း ဆင်ကို ဖြူသည်ဖြစ်စေ၊ မည်းသည်ဖြစ်စေ တိရစ္ဆာန်ပင်ဖြစ်သဖြင့် ရှစ်မခိုးအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
(အချက်အလက်အချို့အား ငြိမ်းချမ်း ပေးပို့သည်။)Rest of your post
ဆင်ဆီးတော့ ဘာဖြစ်သွားမလဲ..? ပြည်သူတွေခမျာ ကောက်စားစရာတောင် အစာ တစ မရှိ ..
အဆိုပါဆင်ဖြူတော်သည် တောဆင် (၅) ကောင် အုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး မောင်တောမြို့နယ်၊ ဖက်ဝပ်ချောင်း ကျေးရွာအနီး မေယုတောင်တန်းတွင် ရှားပါးဆင်ဖြူဖြစ်ပြီး ယင်းကို မောင်တောမြို့နယ်သစ်တောဌာန လက်အောက်ခံ ဆင်ဖမ်းအဖွဲ့က ကျေးရွာသားများ အကူအညီဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။
ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်က မာတင်္ဂဆင်၊ ကေလာသဟထ္ထိဆင်၊ ပုဏ္ဍရိကဆင်နှင့် အရုဏဟထ္ထိဆင်ဟူ၍ ဆင်ဖြူတော် (၄) မျိုးရှိပြီး ဗေဒင်ကျမ်းဂန်များတွင်မူ ဆင်ဖြူ (၇) မျိုးရှိကြောင်း ရန်ကုန် နက္ခတ်ဗေဒင် ဆရာများကို ကိုးကားပြီး မြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:15 PM0comments
နာဇီဗိုလ်ချုပ်တွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ကြံခဲ့တဲ့မျိုးချစ်ယူဂျီတွေအကြောင်း (ပို့ သူ ဇီဇ၀ါမိုး )
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:08 PM0comments
မိုက်မဲသောသူသည် အဖြူရောင်ကို အမှောင်မြင်၏ ၊ အလင်းရောင်ကို အမဲမြင်၏
Monday, June 28, 2010်
မသေခင် လူ့ ဘ၀တွင် ပြည်သူ့ ကျိမ်စာ ခံရသူများ (သို့ ) ငရဲတံခါးဝသို့ (၅၂) ကီလို (ဂါမဏိ)
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ကင်ဆာအဖြစ်ခံကြဆိုပြီး ကျောက်ခေတ်စဉ်းစားနည်းနဲ့တော့ (၂၁) ရာစုမှာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အဲသလိုဆိုရင်တော့ တပ်ချုပ်ကြီးအိမ်တော်နဲ့ ကြပ်ပြေးမြို့တော်ကို သပိတ်ကျဉ်းနျူကလီးယားစက်ရုံဘေး အရင်ရွှေ့လာခဲ့ပါ။ ငရဲပြည်ရဲ့တံခါးဝကို ရောက်ဖို့ သန့်စင်ပြီး ယူရေနီယမ် (၅၂) ကီလိုပဲ လိုပါတယ်။ ။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:52 PM0comments
အမေ စုအတွက် နယူးယောက်ခ် မှ ကုသိုလ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၅ နှစ်ပြည့်နူးယောက်ခ် မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:49 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:08 AM 1 comments
ဝီရ / ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၀
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နယ်မြို့များတွင် အိမ်ထောင်စုအလိုက် မဲပေးနိုင်သူများ ဦးရေစာရင်းတွင် စစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ အသင်းဝင်များအဖြစ် တအိမ်လျှင် တယောက်နှုန်း ထည့်သွင်းရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း အဆိုပါစာရင်းကောက်ခံသူထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“တအိမ်မှာ ကြံ့ဖွံ့ဝင်ထားသူ ရှိလား၊ အခြားအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာက လူတွေရှိလား ဆိုတာတွေလည်း မေးခိုင်းတယ်။ အဲဒီအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ အသင်းဝင်တွေ တအိမ်တယောက် ပါရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားတယ်။ အစိုးရ လက်အောက်ခံ အသင်းဝင် တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ပြီးရောပေါ့” ဟု မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်အတွက် စာရင်းကောက်ခံပေးသူ ဝန်ထမ်းတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကောက်ခံရာတွင် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းဝင်အပြင် အစိုးရ လက်အောက်ခံ အသင်းအဖွဲ့များ ဖြစ်သော မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ပြည်သူ့စစ်၊ စွမ်းအားရှင်၊ ကြက်ခြေနီ၊ မီးသတ်၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ကျေးရွာနှင့် ရပ်ကွက်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း ထည့်၍ရကြောင်း အဆိုပါဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
“အိမ်အများစုက ဒီအဖွဲ့ထဲ ဝင်ထားတာ မဟုတ်တော့ ကြံဖန်လုပ်ရတာပေါ့။ အနည်းဆုံးတော့ အရန်မီးသတ်တို့၊ ကြက်ခြေနီတို့၊ ကြံ့ဖွံ့တို့ရဲ့အသင်းဝင်တွေလို့ ဒီအတိုင်း ထည့်ရတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် မဲပေးနိုင်သူစာရင်းကို ဇွန်(၂၆) ရက်မှ စတင်ကောက်ယူလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ရောက်ရှိနေသူများကို စာရင်းသွင်းရန် မလိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
“လက်ရှိ နေအိမ်မှာ မဲပေးနိုင်တဲ့စာရင်းပဲ ကောက်ခိုင်းတာ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေကို ဒီစာရင်းမှာ မထည့်ခိုင်းဘူး။ ရေးမြို့နယ်မှာ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူဦးရေက များတယ်လေ။ အခုကောက်တဲ့စာရင်းက အခြားဌာနဆိုင်ရာက ရှိပြီးသား စာရင်းတွေနဲ့ သိပ်မကွာသွားအောင်တော့ ကြည့်လုပ်ရတာပေါ့။ ဥပမာ ကျန်းမာရေးမှာ ပေါက်တဲ့စာရင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးက ရှိပြီးသားစာရင်းတွေနဲ့ ကိုက်အောင်တော့ လုပ်ရမယ်လေ၊ မကွာရဘူးပေါ့” ဟု အဆိုပါစာရင်းကောက်ခံသူ ၀န်ထမ်းက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်ရှိနေသူများကို လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနေသူ စာရင်းတွင်သာ ထည့်သွင်းစေပြီး ထိုသူများအနေဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ရုံးများ၌ လာရောက် စာရင်းပေးနိုင်ကြောင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံးများတွင် ကြေညာထားသည်။
အချက်အလက်များအနေဖြင့် အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ကျား/မ၊ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အစရှိသော ပုံစံစာရွက်တစောင်တွင် ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာချိန်၌ တနိုင်ငံလုံး မဲပေးနိုင်သူ ဦးရေ (၂၇) သန်းကျော် ရှိသည့်အနက် မဲပေးခဲ့သူပေါင်း (၂၆.၇) သန်း ကျော်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=2767
မန္တလေးတိုင်းရှိ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချို၊ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံနှင့် ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့တို့ တွင် ဒုံးတပ်ရင်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မေလကုန်ပိုင်း၌ တပ်ရင်းတခုလျှင် အနည်းဆုံး ဒုံးပစ်ခတ်ယာဉ် (၅) စီးစီ ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပျဉ်းမနားနှင့် မန္တလေးအခြေစိုက် ပင်မယန္တရား တပ်ရင်းများတွင်လည်း အလားတူ ဒုံးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်ယာဉ်များ ရောက်ရှိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကကကြည်း ရုံးချုပ်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် (၁ဝ) မိုင်ကျော်အကွာတွင် ဒုံးတပ်ရင်းတခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါစခန်း တွင် တပ်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကာ စစ်သားများလည်း ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း မိုးညှင်းဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့အာဏာ တည်မြဲဖို့အတွက် စစ်တပ်တွေ၊ လက်နက်တွေတိုးချဲ့ပြီး လူထုတွေ၊ လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း တွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့သဘောပဲ။ ဒီစစ်တပ်ကလည်း လူထုထဲက မွေးဖွားလာတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အောက်မှာ အနည်းအများဆိုသလို လူထုရဲ့ဒုက္ခကို သူတို့လည်း ခံစားရတယ်။ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နိမ့်ကျနေတဲ့အောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေသာ ထူးပြီး ခံစားရပေမယ့် အောက်ခြေကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့တန်းတူ ဒုက္ခကို ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လို လက်နက်ပဲရှိနေပါစေ၊ ဒီစစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်တွေလည်း ကျဆင်းနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတို့တွင် တိုင်းပြည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (GDP) ၏ (၁) ရာနှုန်းမျှ မသုံးစွဲဘဲ နေချိန်၌ စစ်ရေးကဏ္ဍတွင် ဂျီဒီပီ၏ (၄ဝ) ရာခိုင်နှုန်းကျော် သုံးစွဲနေသည်ဟု နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်ရေး လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းများ က ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။http://www.khitpyaing.org/index.php?route=detail&id=2770
မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖာဘဲထောင်စားကြဖို့သန်းရွှေ ကြံစည်နေပြီ
ဗီယက်နမ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဈေးကွက်တွင်း ဝင်ရောက် ဖွယ်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဈေးကွက် တွင်းသို့ ဗီယက်နမ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်များ ဝင်ရောက် လာဖွယ် ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည် များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင် များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) တွင် ဇွန်လ ၁၇ ရက် နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ - ဗီယက်နမ် စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ပွဲသို့ တက်ရောက် ခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောကြား သည်။ ဒီမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အတွက် လာမေးကြတာ။ လက်ရှိ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဈေးကွက် အနေ အထားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့တယ်ဟု အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (ဖွဲ့စည်းဆဲ) မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ လက်ရှိ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဈေးကွက် အတွင်းသို့ ပြည်ပမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဝင်ရောက် လာပါက အထူး သဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နှင့် နည်းပညာများ ပိုမို အဆင်ပြေ စေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗီယက်နမ် စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှ နေ၍ အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် အတူ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အခန်း ကဏ္ဍ ကိုလည်း ပူးတွဲ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ သွားရန် ရှိကြောင်း အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဘဏ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဗီယက်နမ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ် (Bank of Investment and Development of Vietnam) ဘဏ်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ် နိုင်ရန် အတွက် လျှောက်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ (MCC) တွင် ပြုလုပ် သော ဗီယက်နမ် - မြန်မာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၀ ၌ BIDV ပြခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ BIDV ဘဏ်ခွဲ ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားဆဲ ဖြစ်သော်လည်း BIDV ကိုယ်စားလှယ် ရုံးကိုမူ ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ Ruby Land ဟိုတယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ ဘဏ်ခွဲ ဘယ်တော့ စဖွင့်မယ် ဆိုတာ ကိုတော့ မပြောနိုင်သေး ပါဘူး။ လျှောက်ထား ဆဲပဲ ရှိပါ သေးတယ်ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ ဘဏ်ခွဲ ဖွင့်လှစ်ရန် နှင့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် သတင်း အချက် အလက်များ စုဆောင်းနေကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘဏ်များ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ စီးပွားရေး သတင်း အချက် အလက်များ စုဆောင်း ခြင်းသာ ရှိနိုင်ပြီး ဘဏ်ခွဲ ကဲ့သို့ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာများ လုပ်ဆောင်၍ မရနိုင်ကြောင်း ဘဏ် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးဝင့်ကျော်က သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
BIDV ကိုယ်စားလှယ်ရုံး အနေဖြင့် မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ခြင်း အစီအစဉ် များတွင် အထောက် အကူ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗီယက်နမ်မှ လာသော The Voice of Vietnam သတင်းတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ် ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း နှစ်နိုင်ငံဘဏ် အချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှု စာချွန် လွှာကို လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့ရာ ယင်းတွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတော် ဘဏ်နှင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး တို့လည်း ပါဝင်သည်။ BIDV ဘဏ်ခွဲကို အမေ ရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ၍ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၌ ဘဏ်ခွဲ ၁၆၀ ကျော် ရှိသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အပိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်းကို အဓိက ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက် သွားရန် ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ် အပတ်စဉ် ဂျာနယ် အချို့တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။ ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုး ဆောင် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက ပြောကြား The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထား သည်။
Posted by အာဇာနည် at 10:58 PM0comments
အလုပ်မရှိ လဥ သန်းရှာသူများ..
၂၆.၆.၂၀၁၀ နေ့တွင် ဆင်ဖြူတော်တစ်စီး ဖမ်းဆီး ရရှိခြင်း (ရုပ်သံ)
ဆင်ဖြုတော်တဲ့ဗျိူ့ဘုရားစူး
Posted by အာဇာနည် at 10:55 PM2comments
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင်ပြည်ပမှဆိုက်ရောက်လာသူများကိုမည်သို့သောအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲပြစ်မှုကျုးလွန်ထားသောတရားခံများသဖွယ် တစ်ယောက်ချင်း Portrait ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ယူနေသဖြင့်ခရီးသွားပြည်သူများစိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ကြရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာစံညွှန်းမမီတဲ့နယ်စပ် ဖြတ်သန်းရေးဂိတ်တွေမှာ တောင်မကျင့်သုးံတဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူပြီး မှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုးံနေတာဟာမြန်မာ လူမျိူးတွေအတွက် အလွန်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ သန်းရွှေတကယ်ကြောက်ရမှာက သူကျုးလွန်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေပါ။ သံဃာသတ်ထားတာတွေ၊ ပြည်သူတွေအငတ်ထားပြီး ( နာဂစ်) မှာ သတ်ခဲ့တာတွေပါ။ နိုင်ငံခြားကလာပြီး သူ့ကိုသတ်မှာကို ကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
မလိုအပ်တဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေ၊အကြောက်လွန်ပြီးလှိုင်ခေါင်းတူးမဲ့ပိုင်ဆံတွေကို တကယ် လိုအပ်တဲ့လေဆိပ် ( လေဆိပ်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပါ။တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လူများအပြင် ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့ရောဂါပိုးမွှားများ နိုင်ငံရပ်ခြားမှမဝင် ရောက်လာဖို့ပထမဆုးံခံတပ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ် ) လို တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သုးံသင့်ပါတယ်။
စေလိုရာစေ အဖေ.. အဖေ့ အမိန့် မှန်သမျှ ပိုက်ခွပြီး နာပါ့မယ်။
နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များက တရုတ်၏ ဖိအားကြောင့် နောက်ထပ် ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် လုံခြုံရေးကို ထပ်မံ တိုးချဲ့လာသဖြင့် အာဏာပိုင်များ၏ ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှု များနှင့် ဒေသအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများ ပိုမို တိုးပွားလာမည်ကို ဒေသခံများက အထူး စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု သိရှိရသည်။ Rest of your post
၁၉၉၁ ရွေးကောက်ပွဲ က အရှုံးသမားတွေ ..အော် သွတ်သွပ် သွပ်
ကိုထွေး Monday, June 28, 2010
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ် တချို့တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (ကြံ့ဖွံ့) အသင်း ၀င်များက ငွေကြေးချို့တဲ့ သူများနှင့် လယ်သမားများကို ငွေထုတ်ချေး၍ စည်းရုံး နေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ရန်ကင်းနှင့် ရန်ကုန် တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တို့တွင် ငွေကြေးချို့တဲ့သူများနှင့် လယ်သမားများကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (USDP) ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည့် ကြံ့ဖွံ့ အသင်းဝင်များနှင့် ရပ်ကွက် လူကြီးများက ထိုသို့ ငွေထုတ်ချေး စည်းရုံးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“အရင် ၃၊ ၄ ရက်လောက်က ရယက ဥက္ကဋ္ဌရယ်၊ ကြံ့ဖွံ့က လူတွေရယ် လမ်းတွေထဲဆင်းပြီး ဆင်းရဲတဲ့ တချို့ အိမ်တွေကို ငွေချေးမယ်ပြောတယ်။ ဘယ်လောက်ချေးမလဲ ဆိုတာတော့ တိတိကျကျမသိဘူး” ဟု ရန်ကင်း မြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။
ကြံ့ဖွံ့ အသင်း၊ USDP ၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊ စစ်အစိုးရတို့ အကြား စနစ်တကျ စည်းခြားပေးရန် ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပါတီ (UDP) က မကြာသေးမီက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
UDPဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက “ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လို့ ထင်ရတဲ့သူတွေက မြို့နယ်တွေမှာ ငွေထုတ်ချေးတာတွေလုပ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ် အဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်း “ကော့မှူးမြို့နယ်မှာ ဆိုရင် အဓိက လယ်သမားတွေကို တဧက ကျပ်တသောင်းနှုန်း ပုံစံမျိုးနဲ့ ထုတ်ချေးနေတယ်။၊ ၁၀ ဧက ကျော်ပေမယ့်လည်း တသိန်းထက်တော့ ပိုမပေးဘူးပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တွင်လည်း လယ်သမားများကို ငွေထုတ်ချေး၍ ကြံ့ဖွံ့ အသင်းဝင်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိနေကြောင်း ဒေသခံ တဦးထံမှ သိရသည်။
အလားတူ ပူတာအိုမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံများကိုလည်း USDPကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပါက ငွေကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်း ပေးမည်ဟု မက်လုံးပေးမှုများ ရှိနေကြောင်း ကချင်သတင်းစဉ်က ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင်လည်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းတို့ အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၊ ကျေးရွာများတွင် ပါတီဝင် စည်းရုံးမှုများကို USDP က ကျေးရွာ လူကြီးများမှ တဆင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကြံ့ဖွံ့အသင်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး စတင် ဖွဲ့စည်းစဉ်က နိုင်ငံရေးနှင့် မပတ်သက်ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် နအဖ၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒများကို အကောင်အထည် ဖော်လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကြံ့ဖွံ့အသင်း ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသိန်းစိန်၊ တခြားသော ၀န်ကြီး ၂၆ ဦးနှင့် စစ်တပ်မှ အရာရှိတို့ စုစည်းကာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် USDP ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က USDPကို ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
USDP သည် ကြံ့ဖွံ့အသင်းကြီး၏ အမွေခံပါတီ ဖြစ်ပြီး ပါတီဝင် ဝန်ကြီးများသည် အစိုးဝန်ထမ်းမဟုတ်သော နိုင်ငံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူများ ဖြစ်သည်ဟု ကြံ့ဖွံ့ အတွင်းရေမှူး ဦးဌေးဦးက မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ် ဒေသရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ်နှင့် တွေ့ ဆုံရာ၌ ပြောခဲ့သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:51 PM0comments
သြစတြေးလျားရောက် ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် သမီး အိမ်ပြန်...
ဒေါင်းအလံခိုး ပြီးနောက် ခမောက်ထပ်ခိုး၍ NLD နဲ့ ND...
ှုငါတို့ လို မိန်းမ၀တ် ပိုးချိတ်ထမီ မ၀တ်လာတာကြောင့်...
တွန့် ဆုတ်နေတဲ့ သုည နဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့သန်းလေးဆယ်...
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး ထက် လူသတ်လက်နက်ဝယ်ရေး နအဖ အနေ...
ဆင်တော့ မသိဘူး ကြွက်တွေတော့ ပြောင်းနေပြီ တိရိစ္ဆာန်...
“ဖြူဖွေးနေတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ ဆန်မှုန့်ရောင်...
ဆင်ဆီးတော့ ဘာဖြစ်သွားမလဲ..? ပြည်သူတွေခမျာ ကောက်စား...
မိုက်မဲသောသူသည် အဖြူရောင်ကို အမှောင်မြင်၏ ၊ အလင်းေ...
မသေခင် လူ့ ဘ၀တွင် ပြည်သူ့ ကျိမ်စာ ခံရသူများ (သို့ ...
တအိမ်လျှင် အစိုးရလက်ဝေခံ အသင်းဝင် တဦးနှုန်း ထည့်ခု...
စေလိုရာစေ အဖေ.. အဖေ့ အမိန့် မှန်သမျှ ပိုက်ခွပြီး န...
၁၉၉၁ ရွေးကောက်ပွဲ က အရှုံးသမားတွေ ..အော် သွတ်သွပ် ...
ရှမ်းပြည်မှ ပအိုးဝ် မီးရှူးပွဲ ပအိုးဝ် အက နှင့် ပအ...
Election fear in Burma
ပါရာဂွေး မှ မွေးနေ့ လက်ဆောင်Praguers address birth...
၂၀၁၃ တွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ လူသတ်လက်နက်အဖြစ် ပြောင်...
ဗမာပြည်အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိတဲ့လောဘသားများ ( မို...
“Ex Tiger Shark 3”
န အ ဖ လက်အောက် သံဃာ တော် များလည်း အခက်ဒုက္ခ ကြုံနေရ...
မလေးရှားသို့ သွား မည့် အမျိုးသမီးများအား သတိပေးစေလ...
လူသားချင်းစာနာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီပြသနာတွေက ပို အေ...
တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သိလို့ပြေးမိပါတယ်။
ခေတ်က မကောင်းတော့ ...ဘာလုပ်စားရမယ်မသိ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး နဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံကို...
ဆင်နွှဲကြပါစို့ ..နိူင်ငံလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်ရေးလုပ...
နအဖ ကြောင့် ကလေးများစွာ ဒုက္ခရောက်နေ (အတင်းအဓမ္မရိုက...
ကြေးနီပေး ကျည်ဆန်ပြန်ယူ စံနစ်..
အမေရိကန်များ...ကြောက်သွားမလားလို့ဖြဲခြောက်ပြနေ
သတင်းစာတွေ အရောင်းထိုင်းနေတာနဲ့ ..မ၀ယ်မနေရတဲ့
အဟင့် ..သွပ်ပြားတို့ ကိုဘဲ အားပေးနော်..( ပုံ..အရှက...
အော် တချိန်က ဗမာသား လှီးစားခဲ့ တဲ့ ဝတွေလည်း အခုတော...
“အတ္တ၀ါဒီ ကျဆုံးပါစေ . . . အဓမ္မ၀ါဒီ ကျဆုံးပါစေ” ဟု ...
ကချင်တွင် မှတ်ပုံ တင်မရှိ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ရှင်များ န...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါကစ္စတန် လက်ရှိ အာဏာရ ပါကစ္စတ...
မွန် က နအဖ နှင့် တွေ့ ချင်တော့ဘူးဆိုဘဲ
ဒီလို ဆိတ်ရေခြုံလို့လုံပြီထင်သလား..ဆင်ကောင်ထီးထီ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ရဲ့ အဖိုးတန်သော စာတမ်း တစ်စောင...
တိုက်ကွက်မရသေးခင် ခံစစ်ဗျူဟာကောင်းဖို့ လိုတယ်
သာဓု သာ ခေါ်လှဲ့ ပါ အမေ..
ပထွေးကြီး အနေနှင့် ဤကိစ္စဘာမှ မသိရပါကြောင်း ရေငုံနု...
မိုးများ၍ ရေကြီးမူကြောင့် နယ်စပ် တွင် ယ္ခင်နှစ်ကဆော...
ဖွတ်များ ချောင်းဆုံတွင် ပြည်သူများအား မှိုင်းတိုက်...
ပုထွေးငယ် လာတယ်ဟေ့ ရှေ့ ကြည့် သတိ
Daw Aung San Suu Kyi Birthday and Burmese Women Da...
သောကကို နင်းချေ အိပ်မက်တွေကို တည်ဆောက် အရှင်ဇဝန
မြန်မာဆိုတာ ဒုက္ခသည် စက်ရုံ..
လိမ်ချက်တော့ ကမ်းကုန် (ဆန်အိပ်သာမြင်ရ မစားရဘ၀)
ဘိန်းစိုက်အောင်တွန်းပို့ ခံရတဲ့ ဒို့ရှမ်းတောင်သူ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ( ၆၅ ) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဆုတောင...
ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ, ခြင်ပေါတဲ့ မြန်မာ
ဟုတ်လို့ ဟုတ်တာပြောတော့လည်း အနာပေါ်တုတ်ကျသလို .. ဟန...
ကရင်တိုက်ပွဲ ဗီဒီယို အွန်လိုင်းတွင် လူကြည့်များ
စစ်တပ်မှာလည်း ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေ... သန်းရွှေလက်အောက် ...
ကြံ့ဖွတ် ကိုယုံလျင် ကိုယ့် ဆူးခြုံကိုယ်တိုးတယ်သာမှ...
ဒေါ်စုပုံနဲ့ ပန်းကို ကန်လိုက်တဲ့ မိစ္ဆာရဲ့ ပုံ